Semalt वेब स्क्र्यापिंगका लागि उत्तम प्रोग्रामिंग भाषाहरू सुझाव दिन्छ
वेब स्क्र्यापिंग के हो? यो डाटा खनन वा वेबबाट उपयोगी जानकारी स collecting्कलन गर्ने प्रक्रिया हो। यो धेरै सक्रिय विकासहरूको साथ एक विस्तृत क्षेत्र हो, र सबै वेब स्क्र्यापिंग कार्यहरूले साझा लक्ष्य साझा गर्दछ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्थ बुझ्ने क्षमता, र पाठ प्रसंस्करणमा सफलता आवश्यक छ। वेब ब्राउजरको प्रयोग गरी वा हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल मार्फत डाटा प्राय इन्टरनेटबाट खरिद गरिन्छ, तर हामी स्क्र्याप गरे पनि Import.io, Octoparse, Kimono Labs र Mozenda जस्ता शक्तिशाली उपकरणको साथ पनि गर्न सकिन्छ।
वेब स्क्र्यापिंगका लागि बिभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाहरू:
तपाईं या त माथि उल्लिखित उपकरणहरू इन्टरनेटबाट डाटा स्क्र्याप गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको वेब स्क्र्यापि tasks कार्यहरू मैन्युअल्ली पूरा गर्न प्रोग्रामिंग भाषा सिक्न सक्नुहुनेछ।
यो वेब स्क्र्यापिंग र डाटा क्रोलिंगका लागि उत्तम प्रोग्रामिंग भाषाहरू मध्ये एक हो। Node.js मुख्य रूपले बिभिन्न वेब पृष्ठहरू अनुक्रमणिका लागि प्रयोग गरिन्छ र एक पटकमा दुबै वितरित क्रलिंग र डाटा स्क्र्यापि supports समर्थन गर्दछ। यद्यपि, node.js केवल आधारभूत-स्तरको वेब स्क्र्यापिंग परियोजनाहरूको लागि उपयुक्त छ र ठूला-ठूला कार्यहरूको लागि सिफारिश गरिदैन।
दुबै सी र सी ++ उत्कृष्ट प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ र वेब स्क्र्यापिंगका लागि उत्कृष्ट प्रोग्रामिंग भाषाहरू हुन्। तपाईं यी भाषाहरू आधारभूत डाटा स्क्र्यापर निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर तिनीहरू वेब क्रलरहरू सिर्जना गर्नका लागि उपयुक्त छैनन्।
यो उल्लेख गर्न सुरक्षित छ कि PHP वेब स्क्र्यापिंगका लागि उत्तम प्रोग्रामिंग भाषाहरू मध्ये एक हो र शक्तिशाली वेब स्क्र्यापर्स र विस्तारहरू विकास गर्न जारी गरिएको हो।
जस्तै PHP, पाइथन एक लोकप्रिय र वेब स्क्र्यापिंगका लागि उत्तम प्रोग्रामिंग भाषा हो। पाइथन विज्ञको रूपमा तपाई बहु डेटा क्रलिंग वा वेब स्क्र्यापिंग कार्यहरू आरामसँग सम्हाल्न सक्नुहुनेछ र परिष्कृत कोड सिक्नुपर्दैन। अनुरोधहरू, स्क्र्याप्पी र ब्यूटीफुलसप, तीन सबैभन्दा प्रख्यात र व्यापक रूपमा प्रयोग हुने पाइथन फ्रेमवर्कहरू हुन्। अनुरोधहरू Scrap र BeautifulSoup भन्दा कम ज्ञात छ तर तपाईंको काम सजिलो पार्न धेरै सुविधाहरू राख्दछ। Scrap Import.io को लागी एक राम्रो विकल्प हो र मुख्यतया डाईनामिक वेब पृष्ठहरुबाट डाटा स्क्रॅप गर्न प्रयोग गरीन्छ। ब्यूटीफुलसप अर्को शक्तिशाली पुस्तकालय हो जुन प्रभावकारी र उच्च-गति स्क्र्यापिping कार्यहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो।
यी तीन फ्रेमवर्क वा पुस्तकालयहरू विभिन्न वेब स्क्र्यापिंग कार्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्छन् र दुवै प्रोग्रामरहरू र गैर प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छन्।
वेब स्क्र्यापिंगका लागि उत्तम प्रोग्रामिंग भाषा के हो?
पाइथन सामान्य उद्देश्यको लागि प्रोग्रामिंगको लागि व्याख्या गरिएको एक उच्च स्तरको प्रोग्रामिंग भाषा हो र तपाईंलाई छिटो गतिमा इन्टरनेटबाट डाटा स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ। यो वेब स्क्र्यापिंगका लागि सबैभन्दा उत्तम प्रोग्रामिंग भाषा हो र यसले गतिशील प्रकारको प्रणाली र तपाइँको काम सजिलो बनाउन स्वचालित मेमोरी व्यवस्थापन सुविधा दिन्छ। पाइथनको सबैभन्दा विशिष्ट विशेषता मध्येको यो छ कि यससँग दर्जनौं फ्रेमवर्क र पुस्तकालयहरू छन् र सिक्न सजिलो छ। PHP एक सर्भर-साइड स्क्रिप्टि that भाषा हो जुन दुबै वेब विकास र वेब स्क्र्यापि tasks कार्यहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो, तर यो एक सामान्य-उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसको मतलब पाइथन PHP र अन्य प्रोग्रामिंग भाषाहरू भन्दा धेरै राम्रो छ र दुवै सरल र गतिशील वेब पृष्ठहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै, तपाईं पाइथन प्रयोग गरेर आफ्नै फ्रेमवर्क वा वेब स्क्र्यापर बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईंको स्क्र्याडेड डाटाको गुणवत्ताको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।